Islaamka iyo Garsoorka – Radio Muqdisho
in Tubta Toosan, Xulashada
Garsoorka ama cadaaladdu waa udub dhaxaadka nolosha, Magacyada Ilaahey waxaa ka mid ah Alcadl ama Garsoore.
Aayadaha Qur’aanka, Axaadiithta iyo atharka Islaamka oo dhan ayaa qoro dheer uga faalloonaya ahmiyadda caddaaladdu u leedahay nolosha dunida iyo aakhiraba.
Colaadaha iyo dhibaatooyinka daba dheeraaday ee ku habsaday dalal badan oo dunida ah, waxa ay salka ku hayaan garsoor la’aan raagtay, dalalka dunida ee horumarka ballaaran gaarayna waxay taas ku gaareen markii ay la dagaaleen dulmiga ayna bulshooyinkooda u xaq sooreen.
Islaamka iyo Garsoorka, waa mowduuca uu toddobaadkan ku saabsan yahay barnaamijka Tubta Toosan oo uu marti noogu yahay Sheikh Maxamed Cabdulle maxamed oo ka mid ah culimada Soomaaliyeed.
Halkan ka dhageyso barnaamijka oo cod ah